समयमै काम होस::Online News Portal from State No. 4
समयमै काम होस
मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ पोखरा खण्डमा अहिले पनि ठाउँ–ठाउँमा अवरोध छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । सरकारको प्राथमिकताको योजना भएका कारण सडक निर्माणका क्रममा बजेट वा अन्य प्राबिधिक कठिनाईहरु नरहेको भएपनि निर्माणको जिम्मेवारी लिएका कम्पनीहरुले बेला–बेलामा देखाउने समस्या र काम चोर प्रबृत्तिका कारण हुने बहानाबाजीका कारण यो सडकखण्डको निर्माणको काम सुरु भएयता सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन् । आयोजनाले टेण्डर प्रकृया सकेपछि वेवास्ता गर्ने अनुगमनको पाटोलाई कमजोर बनाउने र कागजी प्रकृयामा मात्रै विस्वास गर्ने गरेका कारण यो सडकमा समस्या लामो समय रहने संकेत देखा परिरहेका छन् । पोखरादेखि बागलुङसम्म साविकको भूपि शेरचन राजमार्गलाई नै मध्यपहाडी लोकमार्ग मानिएको छ । पक्कि रहेको सडक भत्काएर त्यसको स्तरोन्नती गरिँदै छ । लामो सडक ठाउँ–ठाउँमा अलगअलग खण्ड बनाएर काम भैरहेका छन् । केही खण्डको काम द्रुत गतिमा चलेको भएपनि केही खण्डको काम झारा टार्ने मात्रै भएको देखिन्छ ।
राजमार्ग निर्माणका क्रममा देखा पर्ने मुख्य समस्या भनेको स्थानीयको अवरोध हो । जग्गाजमिन भत्काउँदा वा भएका संरचनामा आयोजनाले हस्ताक्षेप गर्दा सर्वसाधारणमा देखिने केही असन्तुष्टि स्वभाविक हुन् । यो आयोजना राज्यले बनाएको गौरवको योजना हो । नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्ने दायित्व पनि राज्यको नै भएकाले सर्वसाधारणको तहमा आउने यस्ता खालमा समस्या समाधानका लागि नीतिगत तहबाट राज्यले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय आयोजनाको पोखार पर्वत सम्मको खण्डमा साविकको राजनमार्गलाई नै आधार मानेर सडक फराकिलो बनाउने काम भैरहेकाले त्यति धेरै बिबादहरु छैनन् । तर बागलुङदेखि रुकुम जोड्ने खण्डमा यस्ता खालका सानातिना विबादहरु कायम छन् । अझै बागलुङको जिल्ला सदरमुकाम नजिकैको बागलुङ अक्षेते खण्डमा यो समस्या धेरै छ । आयोजनाले समयमा जग्गावालाहरुलाई मुअव्जा दिन नसक्नु, प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सडकको महत्वको बिषयमा जानकारी गराएर सहज वातावरण बनाउन नसक्नुका कारणले लामो समयदेखि बागलुङका बिभिन्न खण्डमा बिबादहरु आउने र कामको जिम्मेबारी लिएका कम्पनीहरु फरार हुने क्रम चलिरहेको छ । त्यो मात्रै होईन सानातिना बिबादका घटना देखाएर निर्माण कम्पनीहरुले तोकिएको समयमा काम नसक्ने र म्याद थप्ने क्रम पनि चलिरहेको छ ।
केही दिन पहिला काठमाण्डौ क्षेत्र नं ६ को एक सडकको बिषयलाई लिएर जवाफ दिने ठाउँमै रहेका सोही क्षेत्रका सांसद गगन थापाले सडक बिभागमा अनसन बसेका समाचार सार्वजनिक भए । जसले गर्नुपर्ने हो उही कसैले नि गरेनन् भन्दै सस्तो लोकप्रियताको लागि सडकमा निस्कीँदा कस्तो सन्देश जाला । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डमा पनि त्यो चित्र देख्न सकिन्छ । राज्यको उपल्लो निकायमा रहेर काम नगर्ने निर्माण कम्पनी र बेवास्ता गर्ने आयोजना कार्यालयलाई कारवाही गर्न सक्ने ठाउँमा रहेका सांसदहरुले नै यहाँको काममा प्रगति देखाउन नसकेको स्विकारोक्ती दिईरहँदा लोकमार्गको कामले फेरी प्राण हाल्ला त ? पछिल्लो समय लोकमार्गको बागलुङदेखि पोखरा सम्मको सबै खण्ड यसै आर्थिक बर्षमा कालोपत्रे गरी सक्ने महत्वकांक्षी लक्ष आयोजनाले सार्वजनिक गरेको छ । केही बजार बस्तीहरुको बिचमा बाहेक लगभग पहिलो चरणको ट्रयाक ओपनको काम सकिएकाले आयोजनाले भनेको जस्तै एक बर्षमा नै सबै काम सक्न सम्भव त छ तर इच्छाशक्ति र जिम्मेबारी बहन मुख्य कुरा हो । लामो समयसम्म भएको बाटो भत्काएर नयाँ बाटो बनाउने बहानमा भैरहेको अबरोधहरुका कारण यो सडकमा साविकको धौलागिरीका लाखौं सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहेका छन् । फेरी पनि बहानावाजीमा अर्को बर्षातको समयसम्म पनि काम नसकेर निर्माण कम्पनीलाई म्याद थपिदिने र सर्वसाधारणलाई दुःख दिने वातावरण बन्न नदिन सबै पक्षको रचनात्मक दवाव आवश्यक छ ।